Ekpere na -amaghị nwoke nke Montserrat maka ụmụ nwanyị dị ime. ? [+ Dị ike! ]
Ekpere nye Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke Montserrat maka ụmụ nwanyị dị ime Chọọchị Katọlik niile na-asọpụrụ ụwa, Ọ bụ otu ụka ebe e kpere ekpere maka Virgin nke Montserrat maka ụmụ nwanyị dị ime ebe ọ bụ otu n'ime ihe nnọchianya nke Nwa agbọghọ Meri Ọ maara nke ọma ihe ọ bụ ime ka ndụ ju n’ime afọ ma nwee ike inye aka n’usoro mmegharị ahụ.
Ekpere bu ihe di egwu nke anyi puru iji oge obula anyi choro n’agbanyeghi onodu anyi.
Akwụkwọ Nsọ dị nsọ kwere nkwa ọfụma dị ukwuu maka ndị na-arịọ maka enyemaka Chineke.
1 Ekpere diri nwa agbọghọ nke Montserrat maka ụmụ nwanyị dị ime Kedu onye bụ nwanyị na-amaghị nwoke nke Montserrat?
1.1 Ekpere diri nwa agbọghọ nke Montserrat maka ụmụ nwanyị dị ime
2 Nwa agbọghọ a ọ ga-enyere m aka?
Ekpere diri nwa agbọghọ nke Montserrat maka ụmụ nwanyị dị ime Kedu onye bụ nwanyị na-amaghị nwoke nke Montserrat?
Amaara m otú e si eme ya Ndị Moreneta, ebe ọ bụ na ọ dị n’elu ugwu, ọ kwụsịbeghị inye onye kwere ekwe niile chọrọ enyemaka gị.
Ọ bụ rue 1881 mgbe Nna Leo XIII A na m ekwuputa ya dịka otu n’ime ndị na - ahụ maka diocese nke obodo Catalonia ma site na mgbe ahụ na-eme ụbọchị ya kwa ụbọchị Eprel 27.
Banyere ọdịdị ya, a maara nsụgharị abụọ, agbanyeghị ihe amaara nke ọma bụ na nke a bụ onyonyo nke si n'eluigwe bịa ka ebum n'uche anyị wulie okwukwe anyị ike ọzọ ọrụ ebube dị adị ma nwee ihu otu nwanyị ahụ nwanyị na-amaghị nwoke Meri.
Ugbu a ịmara nwanyị nke Montserrat na-elekọta ụmụ nwanyị dị ime, ka anyị kpee ekpere.
Meri, nne ịhụnanya mara mma, nwa agbọghọ na -atọ ụtọ nke Nazaret, gị onye kwupụtara ịdị ukwuu nke Onyenwe anyị, na -asị "ee", ghọrọ nne nke Onye nzọpụta anyị na nne anyị: gee ntị taa ekpere m na -ekpe gị: N'ime m a ndụ ọhụrụ na -eto: obere onye ga -eweta ọ joyụ na ọ joyụ, nchegbu na ụjọ, olileanya, obi ụtọ n'ụlọ m.
Lekọta ya ma chebe ya mgbe m na-eburu ya n’obi m.
Nwanyị nwanyị nke Waittọ Oche eche, nye ha ihunanya na obi ike.
Ọ masịrị gị Nwaanyị nke Montserrat kpere ekpere maka ụmụ nwanyị dị ime?
N'oge ahụ ebe ọ dị ime ọtụtụ oge mita ahụ jupụtara n'echiche nhụjuanya na ihe ha na-eme na-agbanwe udo y obi iru ala na ị ga - enwe oge dịka nke a mere ekpere ji bụrụ ebe mgbaba ebe ị ga - aga mgbe nsogbu erutere.
Kpee nwa agbọghọ nke nwanyị dị ime ekpere ekpere!
Mgbe ọ bụla a gwara ya ka o nyere ya aka ka ọ bụrụ ezigbo nne, ọ ga-abịa na nke anyị.
Nke a mere ị ga-enwerịrị okwukwe siri ike na-enweghị okwukwe na anyị ga-enweta enyemaka gị oge niile.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ọ bụ maka anyị ma ọ bụ maka enyi anyị ma ọ bụ ndị anyị maara, ekpere Ọ na - enwe ike oge niile ma ọ bụrụ na ejiri okwukwe na site na mkpụrụ obi eme ya.
Enwere m olileanya na ị nwere mmasị n’ekpere dị ike nye Nwa nke Montserrat maka ụmụ nwanyị dị ime.
Ekpere diri nwa agbogho nke Guadalupe